Isisekelo Semivuzo: Uthando, Ubulili kanye ne-intanethi
I-Reward Foundation iyinhlangano yokuphayona yezemfundo ebheka isayensi ngemuva kocansi nokuthanda ubudlelwano. Uhlelo lokuvuza lobuchopho lwavela ukuze lusiqhubele emiklomelweni yemvelo njengokudla, ukubopha kanye nezocansi ukukhuthaza ukusinda kwethu.
Namuhla, ubuchwepheshe be-intanethi bukhiqize izinhlobo 'ezingavamile' zalezo zinzuzo zemvelo ngendlela yokudla okungenamsoco, imithombo yezokuxhumana kanye nezithombe zocansi ze-intanethi. Bakhomba futhi basuse ngokweqile indawo ebucayi kakhulu yobuchopho bethu, uhlelo lokuvuza. Ukutholakala kalula kwezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi ngobuchwepheshe beselula kukhuphule ubungozi bokulimala ngenxa yokwanda ngokweqile. Ubuchopho bethu abukaguquki ukuze babhekane nalokhu kuvusa inkanuko. Umphakathi ubhekene nokuqhuma kwezinkinga zokuziphatha nokulutha ngenxa yalokho.
E-Reward Foundation sigxila ikakhulukazi ezithombeni ezingcolile ze-intanethi. Ngenkathi sithanda ukugxila ebudlelwaneni bothando obunempilo, akunakwenzeka ukwenza lokho ngaphandle kokuxoxa ngendima yezithombe zocansi namuhla. Sibheka umthelela wayo empilweni yezengqondo nengokwenyama, ubudlelwano, ukutholakala nobugebengu. Sihlose ukwenza ucwaningo olusekelayo lufinyeleleke kwabangewona ososayensi ukuze wonke umuntu akwazi ukwenza izinqumo ezinolwazi mayelana nokusetshenziswa kwezithombe zocansi ze-intanethi.
Nakuba ukuvezwa kwezithombe zobulili ezingcolile kungabi yingozi kwabanye, ukunyuka kwamahora okubukwa kanye nezinhlobo ezibukwe kungaholela ezinkingeni ezingalindelekile emisebenzini yomphakathi, emsebenzini, nempilo kwabanye. Kungabangela isikhathi etilongweni, izinhloso zokuzibulala kanye nezinkinga ezihlukahlukene zezempilo. Sicabange ukuthi ungaba nesithakazelo sokufunda ngokuhlangenwe nakho kokuphila kwalabo abaye babika izinzuzo ezinhle ngokushiya izithombe ezingcolile ezibhekene nemiphumela emibi kusukela eminyakeni yokusetshenziswa ngokweqile. Umsebenzi wethu usekelwe ekucwaningweni kwezemfundo kanye nalezi zimo zangempela zokuphila. Sinikeza isiqondiso ekuvimbeleni nasekuqiniseni ukwakha ukucindezeleka nokulutha.
Sibhalisiwe njenge-Scottish Charitable Incorporated Organization SC044948, esekelwe ku-23 Juni 2014.
Ukuqhubela phambili imfundo ngokuqhubekisela phambili ukuqonda umphakathi mayelana nomjikelezo womjikelezo wobuchopho nokuthi uxhumana kanjani nemvelo, futhi
Ukwenza ngcono impilo ngokuqhubekisela phambili ukuqonda umphakathi ukwakha ukuqina kokucindezeleka.
Imininingwane ephelele ye-The Reward Foundation ibhaliswe neHhovisi le-Scottish Charity Regulator futhi iyatholakala kule Iwebhusayithi ye-OSCR. Imbuyiselo yethu yaminyaka yonke, eyaziwa nangokuthi Umbiko Wonyaka, iyatholakala kwa-OSCR kulelo khasi.
Nasi ithimba lethu lobuholi lamanje.
Mary Sharpe, Advocate, has been our CEO since March 2021. Since childhood Mary has been fascinated by the power of the mind. She calls on her wide professional experience, training and scholarship to help The Reward Foundation tackle the real issues of love, sex and the Internet. For more information on Mary click lapha.
Amalungu Ebhodi afaka…
U-Anne Darling ungumqeqeshi womqeqeshi nomphakathi. Uhlinzekela ukuqeqeshwa kwabantwana kuzo zonke izigaba kubasebenzi bezemfundo emkhakheni wesikole ozimele. Futhi uhambisa izifundo kubazali kuzo zonke izici zokuphepha kwe-intanethi. Ube ngummeli we-CEOP eScotland futhi usize ukudala uhlelo lwe-'I-Keeping Myself Safe 'lwezingane eziphansi eziphansi.
U-Mo Gill wajoyina iBhodi lethu ku-2018. Ungumqeqeshi omkhulu we-HR, uMnyango wezokuThuthukiswa koHlangano, Umgqugquzeli, uMlamuleli, noMqeqeshi oneminyaka engaphezulu kwe-30 yezinhlangano ezikhulayo, amaqembu kanye nabantu ngabanye. U-Mo uye wasebenza emiphakathini yomphakathi, yangasese neyokuzikhethela ezikhundleni eziningi ezinselele ezihambisana kahle nomsebenzi we-The Reward Foundation.
Asihlinzeki ngelashwa. Senza izinsizakalo zokubhalisa ezenzayo.
I-Reward Foundation ayihlinzeki ngezeluleko zomthetho.
I-Reward Foundation isebenza ngokubambisana ne: